Otu esi edebanye aha na Wallapop | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi edebanye aha maka Wallapop
N'oge ndị a, ọ bụrụ na enwere ihe na-abawanye kama ịbụ ihe na-emebi, ọ bụ ngwa ndị na-enyere anyị aka ire ma zụta ngwaahịa ngwaahịa. Taa, anyị ga - eduzi gị n'iji weebụsaịtị Wallapop na ngwa ya maka iOS ma ọ bụ Andorid.
Njirimara nke ọrụ a bụ na ị gaghị enwe ike ịdebanye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ mkpanaka, ya bụ, ị ga-ebudata ngwa maka iOS ma ọ bụ gam akporo, mezue usoro ndebanye aha wee malite iji ikpo okwu.
Ka anyị bido ịkọwa ntakịrị etu wallapop.com si arụ ọrụ, nke bụ oghere intaneti ebe usoro a niile na-aga. Ozugbo ị banyere na websaịtị ị ga-enwe ike ịlele ngwaahịa ndị ahụ n’ụdị kaadị nke egosipụtara gị foto nke ngwaahịa a, ọnụahịa obere nkọwa na onye ọrụ na-ere ya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ọ bụla, pịa na kaadị a ga-ebutegharị gị gaa na peeji ọhụrụ nke enyere gị ozi ndị ọzọ ma gwa gị na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ngwaahịa ị ga-ebudata ngwa Wallapop na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Anyị na-aga n'ihu igosi gị ikpe ị ga - agbaso ịdebanye aha na ngwa mkpanaka. Anyị na-egosi gị usoro na ngwa maka iOS, na-agwa gị na ma na iOS na gam akporo usoro ndebanye aha ahụ yiri.
Ozugbo ibudata ngwa maka iOS ma banye na ya, ị ga-ahụ na egosiputara mgbasa ozi ngwaahịa a. Ihe ị ga - eme iji debanye aha bụ:
Pịa na aka ekpe aka ekpe na akara ngosi nke ahịrị atọ mgbe nke a gasịrị ị ga-ahụ na ihuenyo ahụ na-aga n'aka nri na E gosiputara gi menu awọ nke ihe mbu bu Register.
Pịa na Debanye aha ma enyere gị nhọrọ ịme ya na akaụntụ Facebook gị ma ọ bụ jiri akaụntụ Gmail. Ọzọkwa, Nwere ike ime ndebanye aha na ụzọ ọdịnala ma aha na aha nna gị, email na paswọọdụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro a dị mfe, agbanyeghị na ọ dịtụ iche na nyiwe ndị ọzọ nke nsụgharị weebụ na nsụgharị maka ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ịzụta zụrụ ngwaahịa ụfọdụ. N'okwu a, na ụdị weebụ ị nweghị ike bulite ngwaahịa na weebụ, nke ị ga-ejikwa site na ngwa mkpanaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi edebanye aha maka Wallapop
Obinna 81254 dijo
Wallapop Web anaghị arụ ọrụ. The nkata akụkụ adịghị arụ ọrụ, ọ na-egbochi loading ozi.
Yabụ ma ị jiri ngwa mkpanaka ma ọ bụ ịnweghị ike iji Wallapop.
Etu esi ebudata ihe nchọgharị Windows 10 Spartan
Esi gbanwee aha njirimara Snapchat gị